5 Best European n'isi obodo Iji Travel Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best European n'isi obodo Iji Travel Site Train
The oge emesịa – ma ị na-na na ka gụsịrị akwụkwọ na mahadum, na-aga maka gị kwa afọ ezumike, ma ọ bụ kpebiri na ndọrọ nke ala njem na-apụghị Agbaghara, ị họọrọ ịga Europe ụgbọ okporo ígwè. Ọ bụ a ihunanya echiche, a mee njem gaa ọtụtụ puku ofụri afọ. Ọ nwekwara ike ịbụ kpamkpam bogbuo. Europe mara maka ya ndị magburu onwe okporo ígwè njikọ. Site ọnụ ala obodo tiketi ka Afrika-onwere EU okporo ígwè ngafe, ọ dị mfe hop na ihe overnighter na-abata na ị na-aga -ututu, njikere maka gị Kacha ọhụrụ njem.
Ma ebe kwesịrị ị na-aga? Ma ọ bụ gị oge mbụ ma ọ bụ gị iri, n'oké olu nke ụgbọ oloko dị nwere ike ime ka nchegbu, mgbagwoju anya na ngụkọta egwu efu si. iche bụghị – n'ihi na anyị na-na gbakọrọ n'ebe a ịwụ ndepụta 5 kacha mma European n'isi obodo na njem na ụgbọ okporo ígwè. Tukwuru ala, nkechi elu, na-azọpụtanụ ụlọ maka France kasị mma baguettes, n'ihi na anyị na-aga na a na-agba ịnyịnya.
1. Best European n'isi obodo Iji Travel Site Train: Paris, France
dị ka nkwa, anyị na-amalite njem a chara, na a na-akwụsị na otu onye nke ụwa kasị ama na famously ihunanya obodo. Paris nwere ụfọdụ ndị kasị mma okporo ígwè njikọ gburugburu, na ụgbọ oloko na-agba ọsọ ofụri obodo center, ya mere na ị na-na na mgbe dị anya site a ojii. Paris jupụtara ihe na-eme, ya mere na ị ga-achọ ịnọ ebe a maka dịkarịa ala ụbọchị atọ aghọtatụ obodo ndụ.
Kwụsị site na Louvre maka a peek na Mona Lisa ma ọ bụ na-egosipụta ndị glutes site arịgo na Arc De Triomphe. Enwe a nri abalị na nrughari na Rhine, ịkwụ ụgwọ a nleta ụfọdụ french boutiques, and take in the gleaming Eiffel Tower as it comes to life in the evenings.
N'ezie, Paris bụ ihe karịrị ya obodo center. The-esetị obodo ukwu karịrị nde mmadụ abụọ na, nke pụtara na ị ga na-emefu izu ebe a na-enweghị n'ezie scratching elu nke ihe o nwere na-enye. Getaway maka a ụbọchị njem si ìgwè na Pont Alexandre III na isi Versailles, ebe Royal Obí ka na-achị achị elu n'agbanyeghị ya ohere kemgbe 1700 si. Day tiketi ndị dị nnọọ € 20 na-agụnye ntinye Obí, na Gardens na ọtụtụ ndị ọzọ. ọbụna ka mma, ụgbọ oloko na-agba ọsọ site n'etiti obodo ozugbo na Obí, nke na-eme na-e a ikuku. Nke a interconnectedness eze na-eme ka Paris otu n'ime anyị mma European n'isi obodo maka ụgbọ okporo ígwè njem.
Otu nke m onwe onye ọkacha mmasị obodo na a mere awa abụọ site Paris ụgha isi obodo nke United Alaeze: London. Nke a agbaze ite nke omenala bụ n'ụlọ ka a whopping nde mmadụ itoolu ndị mmadụ si n'agbụrụ dị iche iche. Site posh Chelsea na spirited Soho, ị ga-ahụ na-eme onye ọ bụla na gị party. Catch otu n'ime ọhụrụ egwú tupu n'isi n'elu Shakespeare Globe na rụchaa abalị gị na Shard, na tallest ụlọ elu dị na London.
Ị ga-chọrọ ọsọ ọsọ site na nke a obodo, ka na-eme atụmatụ gị oge ya. Ma ị na-aga Harry Potter nka (otu awa site n'etiti obodo), ma ọ bụ nanị ihe na isi akara dị ka Tower of London, St. Paul Katidral, Westminster Abbey, Big Ben, ma ọ bụ na London Eye, na minit ọ bụla nọrọ na London bụ ohere iji mụtakwuo banyere obodo onye Empire ozugbo spanned ụwa.
The Eurostar elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè na-ewe gị site na Paris na London center na nanị ihe karịrị awa abụọ, nke pụtara na ị ga-anọ obere oge na-ejegharị ejegharị na ndị ọzọ oge adventuring. N'ihi ya, anyị na-atụle London na-ọzọ nke kasị mma European n'isi obodo na njem ụgbọ okporo ígwè.
3. Best European n'isi obodo Iji Travel Site Train: Amsterdam, Netherlands
Famous n'ihi na ya ọwa mmiri na ịnyịnya ígwè-dabere bi, Amsterdam enwu dị ka Netherland isi obodo. Na a pụrụ iche a haziri, Amsterdam bụ kpam kpam maa mma obodo na a standout n'etiti European n'isi obodo. Ụgbọ oloko si Paris adịru awa atọ na-edebe gị na Amsterdam Centraal, emi odude ke esịt nke obodo.
Head na Museumplein na-na Van Gogh ngosi nka tupu n'isi na House of Bols mmanya & Genever Ahụmahụ, nke na-agụnye ị na-ahọrọ nke mmanya ya akatabi okop ụlọ.
Echefukwala na nrughari na ọwa mmiri, ma. Ma ị na-ewere a raara onwe ya nye tour ma ọ bụ iwuli elu n'elu otu n'ime obodo n'ihu ọha ụgbọ mmiri, ị ga-esi a dum ọhụrụ na-ele si na mmiri. N'agbanyeghị ya propensity maka ụgbọ mmiri na anyịnya igwe, Amsterdam bụ nnọọ mfe site na Europe nile site elu-ọsọ rails, na-eme ka a ọzọ n'elu contender maka kacha mma European isi obodo maka ụgbọ okporo ígwè njem.
A Agba German nka, obodo Berlin bụ a na-adọrọ mmasị ọmụmụ ke n'ubi, akpọnwụwo. Kewaa abụọ site Berlin Wall, a isi obodo naanị nwetaghachiri ịdị n'otu ya na 1989 esonụ ida nke ọchịchị Kọmunist na-anyanwu. Kemgbe ahụ, ya gbawara na obodo mepere emepe ibu ma ugbu a, n'ụlọ ihe karịrị nde mmadụ abụọ na. Ọ bụ jupụtara craft biya Ogwe, ngosi ihe mgbe ochie, na graffitied foduru nke Wall.
Dị ka etiti nke mba omenala, Berlin bụ a kwesịrị-nleta. Ma ị na-achọ nụchara ntụrụndụ n'ụdị ihe opera ma ọ bụ na-achọ iti ụfọdụ nke hippest haunts na Europe, Berlin na-agaghị Agbaghara.
Ezie na ọ ga-ewe gị dịkarịa ala isii awa iji nweta ebe a si Amsterdam, e nwere ọtụtụ ụgbọ oloko kwa ụbọchị, nke pụtara na ị nwere ike ịtọ gị onwe gị oge na-abata.
5. Best European n'isi obodo Iji Travel Site Train: Prague, Czech Republic
Iche Western European n'isi obodo, Prague bụ isi obodo nke Czech Republic na Eastern Europe na otu n'ime ndị kasị ama Central European obodo. Home ka otu n'ime ndị kasị ama ọba akwụkwọ na ụwa, na Klementium, Prague ewepụtakarị ya omenala gburugburu n'akụkụ ọ bụla. Gaa Leta Astronomical Elekere, ndị kasị ochie ọrụ elekere na ụwa. Were a stroll gburugburu Old Town Square, ebe cobblestone n'okporo ámá na pedestrianized Lanes pụtara i nwere ike iji ọtụtụ awa na-awagharị awagharị na-enweghị-echegbu onwe.
Top anya gị oge na a ọṅụṅụ nke onye nke obodo ọtụtụ okpuru ulo Ogwe tupu n'isi si a music ememme.
Prague obụrede mbụre magburu onwe ụgbọ okporo ígwè njikọ na obodo ndị ọzọ, tinyere a njem oge site Berlin nke anọ na ọkara awa. Kwụsị ebe a iji na-enweta akụkọ banyere obodo ahụ tupu iso njem gị n'akụkụ ndị ọzọ nke Europe.
Europe bụ a sara mbara na iche iche odida obodo onye Union pụtara ya mfe karịa mgbe ọ bụla na njem ụgbọ okporo ígwè. -Uru nke borderless mba njem ndị a akụkọ ihe mere eme isi gị oge. Ikwu na isi ọwụwa nke na ọdụ na ya ìgwè mmadụ na overpriced ụgbọelu nri na-eji ụgbọ okporo ígwè na njem. Ma ị na hop na osisi a na mpaghara ụzọ ma ọ bụ na-emefu a obere ụma maka elu-ọsọ okporo ígwè, i ga-ebi tren njem, na nlegharị anya na a dum ọtụtụ ihe.
Anyị nwetara gị kpuchie anyị njem Atụmatụ. Ugbu a ọ bụ oge akwụkwọ ụfọdụ gbaa ụgbọ okporo ígwè! Save A Train bụ ebe ịzụta gbaa ụgbọ okporo ígwè.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best European n'isi obodo Iji Travel Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/european-capitals-travel-train/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ya / de ma ọ bụ / es na ndị ọzọ asụsụ.
isi obodo capitals europeantravel europetrains eurotrip London Train Travel travelfrance travelgermany nje ndi njem